Ndi ode akwukwo ndi ruteghi mmeri Nobel na Literature | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Ndi ode akwukwo ndi merieghi Nobel Prize for Literature
N'ime afọ nke Nobel Nrite na Literature kwụsịtụrụ na afọ 117 nke trajectory, nyochaa akụkọ ihe mere eme nke otu n'ime onyinye kachasi ugwu na akwukwo ozi emeela ka anyị zọpụta ndị a ndi dere akwukwo ndi merieghi Nobel Prize for Literature. Ndị ode akwụkwọ n’agbanyeghi ọganiihu na ọganiihu ọha na eze na ọrụ ha niile na-abụ ndị na-aga n’ihu ebighi ebi
2 Ngịgwa wa Thiong'o
7 James ọrịre
Ndi dere akwukwo ndi n’etinyeghi Nobel Prize for Literature bu ndi amara dika «furu efu«. Nhazi nke Japanese Haruki Murakami bụ onye nnọchi anya kasịnụ. Ebumnuche ebighi ebi maka onyinye Swedish Academy na aha na-egosi kwa afọ na ọdọ mmiri, onye edemede nke Tokyo Blues na Kafka n'ụsọ mmiri ka ndị ode akwụkwọ ndị ọzọ sitere na Japanese ndị meriri Nobel kpuchiri ya Kazuo ishiguro. Otu n'ime ihe mere eji jụ Murakami onyinye a, enwere echiche dị iche iche, gụnyere ọnọdụ nke onye na-ere ahịa kacha mma na ọrụ ya rụzuru na obere agụmakwụkwọ nwere mmasị na ya, ma ọ bụ agwa ọhụụ nke ndị nkatọ dị iche iche gosipụtara na mmalite ya. ka ya mfe style. Otú ọ dị, anyị tụkwasịrị obi na onye Japan kacha mara amara n’uwa merie ihe ntaa ubochi.
Ngịgwa wa Thiong'o
Ngọ bụ Thiong'o, n'oge otu n'ime nkuzi ya.
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, onye ọzọ na-ede akwụkwọ na ọdọ mmiri maka Nrite Nobel na Akwụkwọ bụ Thiong'o, onye edemede nke Kenya gbachitere ọdịbendị nke ndị Kikuyu, ihe ngosi nka ya, asusu ya na akwukwo ya n’iru mmegbu nke ndi ichi ochichi. Onye edemede nke ọrụ nke bụrụbu akụkụ nke akụkọ ihe mere eme nke Africa n'oge a dịka Ọka wit ma ọ bụ edemede a tụrụ aro Mebie uche gị, onye edemede a chụpụrụ n'obodo ya kwesịrị ịghọ onye mmeri na-asọpụrụ n'ihi mbọ ọ na-agba dị ka onye na-akwado na olu maka mpaghara ojii. Ihe kpatara ya ka amabeghị.
Ọ bụrụ na e nwere onye edemede Latin America nke kwesịrị Nobel, ọ bụ Jorge Luis Borges. Onye Mere ihe odide nke ga-agbanwe traject nke akwukwo nke XNUMXBorges na-ada ụda dị ka onye na-akwado maka iri afọ abụọ tupu ọnwụ ya na 1986 na-enweghị mmeri ọ bụla. N’ezie, afọ aha ya siri ike n’afọ bụ 1976, n’agbanyeghi nzukọ ya na Pinochet na September 22 jere iji tụfuo ya kpamkpam. Otu ihe ọzọ mere ị ga-eji chee na, dịka o mere onye edemede nke Aleph, ndị ode akwụkwọ ndị ọzọ enwetaghị onyinye ahụ maka ebumnuche ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Otu onye otu ndi London ahutara na akwukwo akwukwo 20 na ndi nwanyi ndi nyere aka nchikota ndi nwanyi N'ebe dị iche iche nke ọha mmadụ, Virginia Woolf ga-agabiga n'oge machismo wakporo ihe niile. N'ezie, enweghị ike nwanyị ide ihe n'ụmụ nwoke ụwa bụ isi okwu nke ya a ma ama edemede Roomlọ nke Onwe Ya, ọrụ nke a ga-achọtaghachi na 70s n'oge mmegharị nwanyị. Chepụtara ọrụ dị ka ewu ewu dị ka Oriakụ Dalloway ma ọ bụ Na Lighthouse, Thelọ akwụkwọ mmachi nọchiri Woolf n'oge ụwa dị ka ọ dịbeghị njikere ịkwụ nwanyị na-ede akwụkwọ ụgwọ.
Onye edemede nke ndị Juu bụ otu n'ime nke kachasị emetụta na akwụkwọ narị afọ nke XNUMX site na ịmepụta akụkọ ndị na-adịghị ahụkebe, wepụrụ kpamkpam n'ihe a tụụrụ ime. Onye edemede nke akwụkwọ akụkọ The Trial, The Castle, The Missing na ama MetamorphosisKafka enwetabeghị Nrite Nobel maka Akwụkwọ, dị ka ndị ọkachamara si kwuo, maka edemede edemede nke Academylọ Akwụkwọ ahụ adịbeghị njikere. Agbanyeghị, oge egosila na ọ bụ onye ode akwụkwọ nke na-emetụta mmetụta ya ugbu a na akwụkwọ edemede ya.
Ha na-ekwu na n'oge ememe nke mbụ Nobel Nrite na Literature na 1901, onye Russia Leon Tolstoy na-ada ka onye isi akwukwo iji nweta mmeri ahụ. Agbanyeghị, nke a dabara n'aka onye France na-ede uri bụ Sully Prudhome. Afọ ole na ole ka nke ahụ gasịrị, mgbe e bipụtara akwụkwọ nke onye mmụta Sweden bụ Kjell Espmarkse nke kọwara ihe kpatara butere nturu ugo ahụ, amụtara na refusedlọ akwụkwọ ahụ jụrụ inye ya onyinye ahụ, tụlee ọrụ ya dị ka "mbuso agha megide omenala" dị ka megide Church na State. A jụrụ na-ede akwụkwọ nke Agha na udo Ọ bịara ịkele, na-ekwu na "ọ masịrị ya ịghara ịnara ego nke jupụtara na ihe ọjọọ."
Dị ka Gabriel García Márquez si kwuo, James Joyce bụ onye edemede kachasị ike na narị afọ nke XNUMX n'ihi ọtụtụ ihe. Ma nke isi bụ ike ya imegharia kpochapụwo dika Homer's Odyssey na 1910s Dublin na-enye akụkọ na-atọ ụtọ ma eleghị anya na-emebi iwu maka oge ya. N'ezie, dị ka ekwuru site na kọleji ahụ a kpọtụrụ aha na mbụ Kjell Espmark, "Academylọ akwụkwọ ahụ adịghị njikere maka ụdị akwụkwọ ọhụrụ a, na-atụkwasịkwu obi na akwụkwọ ozi ọdịnala." Mentor nke ọgbọ nke ka na-agba ọkaibe Omsbọchị ụka Kwa June 16, Joyce bụ ihe ọzọ dị ukwuu ndị kọmitii Nobel Nrite chefuru.
E wezụga ihe ịtụnanya na ihe ahụ a na-akpọ "Latin American boom" kwesiri ka ọ dị na 60s, Julio Cortázar bụ onye ode akwụkwọ gbanwere ụdị na otu esi akọ akụkọ. Dịka ọmụmaatụ, ọrụ ya ka dị Rayuela, nke bụụrụ ndị na-agụ oge ya ihe ịma aka (na taa). N'oge ahụ, a jụrụ onye ode akwụkwọ ọ bụrụ na ọ ga - achọ inweta Nobel chọr'inwe maka Akwụkwọ, nke Cortázar zara "Ee, m ga - achọ ịnweta ya iji ngwa ọgụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị megide ndị edemede Latin America ndị rere onwe ha fascism . " Ihe ndị mere na ọ nwetaghị Nobel edoghị anya, mana anyị ghọtara na neverlọ akwụkwọ ahụ enweghị mmasị na ha ndị ode akwụkwọ na-ezighi ezi dị ka Cortázar.
Ì chere na ndị edemede a na-enwetaghị Nrite Nobel na Literature kwesịrị nturu ugo ahụ? Kedu ndị ode akwụkwọ ndị ọzọ ị ga-etinye?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ndị edemede » Ndi ode akwukwo ndi merieghi Nobel Prize for Literature
Onye ọzọ kwesịkwara inweta Nrite Nobel bụ Juan Rulfo.
Tolstoy, kafka, xhojsi kwesịrị ya n'ezie. Ọ na -ewute m nke ukwuu maka ajọ mbunobi megide ha!
Zaghachi Migel Dulillari
Graham Green kwesịrị ịnata Nobel.
Zaghachi Felipe Abalos
William Butler Yeats. Afọ 153 nke nnukwu onye na-ede uri Irish. 6 poems